Shaqsiyaad bulshada u dhaq dhaqaaqa oo la abaar mariyay – Radio Muqdisho
Ra’iisulwasaare ku-xigeenka dalka iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho uga qeybgalay munaasabad lagu abaalmarinaayay shakhsiyaadka u ololeeya dadka tabaaleysan ee qaba baahida gaarka ah, sidii ay u heli lahaayeen adeegyo waxbarasho, caafimaad iyo mid shaqo.
Qaar ka mid ah mas’uuliyiinta ka hadlay goobta waxa ay sheegeen in dadka aan lixaadooda dhameystirneyn ay u baahanyihiin daryeel dhinac waliba leh, loona baahanyahay in dowladda ay u istaagto sidii dadka naafada ah ay u heli lahaayeen xaquuqda dadka aan lixaadooda dhameystirneyn.
Wasiirka Haweenka iyo Xuquuqda aadanaha ee Xukuumadda Soomaaliya Sahro Maxamed Cali Samatar ayaa sheegtay in Wasaaraddu ay ku howlantahay dhameystirka sharciga xuquuqul insaanka, kaasi oo ay ku tilmaamtay inay ku cadahay xuquuqda dadka naafada ah.
Wasiirka Caafimaadka ee Xukuumadda Soomaaliya Drs Xaawo Xasan Maxamed ayaa hoosta ka xariiqday in isbitaallada dalka ay dhawaan gaarsiiyeen dawooyin loogu talagalay in loogu adeego bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda tabaaleysan.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte Qaalib ayaa bogaadiyay shaqsiyaadka abaalmarinta la guddoonsiiyay ee u taagnaa sidii walaalahood ay u heli lahaayeen waxa ay heystaan dadka kale ee lixaadooda dhameystirantahay.
“In dadka aan lixaadooda dhameystirneyn loo istaago oo wax loo qabto, waa mid waajib nagu ah, hooyinka ayaa inta badan dhibka dadka dhimirka la’ la qeybsada, marka waxaan dooneynaa in wixii aan ka qaban karno aan ka qabano, dadka kale arrimahan wax ka qaban karo, dhankooda ay u istaagaan, oo Wasiirka caafimaadka ay gacan ka geysato sidii dib loo furi lahaa isbitaalka dadka dhimirka la’.”ayuu yiri Ra’iisul wasaare ku-xigeenka
Shaqsiyaadka abaal marinta la guddoonsiiyay ayaa isugu jiray mas’uuliyiin ka tirsan dowladda iyo bulshada qeybaheeda kala duwan, kuwaasi oo ku muteystay dadaalka ay wax u qabashada